दाजुभाईको झगडाले २ वर्षमै यसरी स्वाहा भयो बाउले कमाएको साढे २ खर्ब ! – Khabar Silo
काठमाडौं । २१ सेप्टेम्बर २०१६ मा विश्वविख्यात म्यागेजिन फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार मलविन्दर र शिविन्दर मोहन सिंह भारतीय धनीहरुको सूचीमा ९२ नम्बरमा थिए । तर, त्यसको २ वर्षपछि २४ सेप्टेम्बर २०१८ मा आइपुग्दा दुबै भाइले बाउले आर्जेको २२ हजार ५०० करोड भारु तथा आफ्नो पूरा कारोबार गुमाए ।
र, अहिले उनीहरु धनी होइन ऋणीको सूचीमा आइपुगेका छन् । ७ डिसेम्बर २०१८ मा मलविन्दर सिंहले आफ्नो भाई शिविन्दर सिंहमाथि एउटा आरोप लगाए । भने, ‘मलाई ५ डिसेम्बरमा भाइले आक्रमण गर्यो ।’ दाईले आरोप लगाएपछि भाईले जवाफ फर्काए । भने, ‘भाईले दाजुमाथि मारपिटको आरोप लगाए ।’
मालविन्दरले त्यतिबेला एउटा तस्बिर सेयर गरे, जसमा उनी घाइते देखिएका थिए । यद्यपि दुबै जनाले एक अर्को विरुद्ध उजुरी भने गरेनन्। शिविन्दरले एक भिडियो पोस्ट गर्दै भनेका थिए, ‘५ सेप्टेम्बर २०१८ को साँझपख ६ बजेतिर भाई शिविन्दर मोहन सिंहले ५५ हनुमान रोडमा मलाई मारपिट गर्यो, सर्ट च्यातिदियो र मलाई घाइते बनायो ।’
तर यो झगडाभन्दा अगाडिको कथा केही फरक छ । मलविन्दर मोहन सिंह र शिविन्दर मोहन सिंह दुबै व्यवसायी हुन । कारोबार बर्बादीको अवस्थामा आइपुग्नुभन्दा अघिसम्म दुबैले एकैसाथ काम पनि गरे । निकै सफलता समेत पाए । सफलताको स्वाद लिँदासम्म दुई भाईबीच भएको झगडाबारे कसैले देखेनन् ।
तर ४ सेप्टेम्बर २०१८ का दिन शिविन्दरले दाईमाथि मुद्दा चलाउने बताए । नेसनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलमा उनले मलविन्दरमाथि जालसाजी, उत्पीडनको आरोप समेत लगाए । जसमा भने– दाईले मेरी श्रीमति अदितीको फर्जी हस्ताक्षर गरे । उनले दाजु मलविन्दर रेलिगेयर कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष सुनिल गोधनानीलाई कम्पनी ऋणमा डुबाएको आरोप लगाए ।
सफलताको स्वाद लिइरहेका उनीहरुको जीवनमा यो पहिलोपटक थियो, जसमा दुबै भाइबीच तीतो सम्बन्ध देखिएको थियो । यसभन्दा अघि नै उनीहरुले आर्थिक बर्बादी देखिसकेको थिए । भोगिसकेको थिए । आफ्नै कम्पनी फोर्टिस र रेलिगेयरबाट मालिकको हक गुमाइसकेका थिए । ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरुले सेयर बैंकमा धितो राखेका थिए । बैंकको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकले धितोका रुपमा राखिएको सेयर जफत गरेको थियो ।
त्यतिबेलासम्म उनीहरुले सबै गुमाइसकेका थिए । उनको यो बर्बादीको कथा निकै रोचक छ । अनुभवले खारिएका दुबै भाइसँग सम्पत्ति पनि प्रशस्तै थियो । ऋणले गर्दा अगाडि बढ्ने सबै बाटो गुमाइसकेका थिए ।
यस कथाको सुरुवात भारतको अमृतसरमा भागबण्डाभन्दा पहिलेदेखि हुन्छ । हजुरबुबाका दुई छोरा र उनीहरुका दुई छोराहरु थिए रणजीत र गुरबक्स । दुबै जना मिलेर औषधी वितरणका लागि एक फर्मको सुरुवात गरेका थिए । रणजीतको नामको सुरुका २ अक्षर र गरबक्सको नामको आखिरका २ अक्षरबाट कम्पनीको नामाकरण गरिएको थियो ।
तर यो कम्पनी सन् १९४७ मा बिक्री भयो । भारतबाट पाकिस्तान अगल भएपछि रावलपिन्डीबाट मोहन सिंह दिल्ली आए । उनले उक्त फर्म खरिद गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले निकै प्रगति गर्यो । निकै राम्रो औषधी उत्पादन पनि भयो ।
मोहन सिंहपछि कम्पनी उनका छोरा परविन्दर सिंहले सम्हाले । उनले कम्पनीलाई विदेशसम्म पुर्याए । परविन्दरका २ जना छोराहरु थिए। मलविन्दर र शिविन्दर । सन् २००० मा परविन्दरको मृत्यु भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दुई भाईमा आइपुग्यो । परविन्दरका भाई अनलजीत पनि करोडपति थिए । उनले म्याक्स ग्रुप स्थापना गरेका थिए ।
१० वर्षमा केसम्म हुनसक्छ ?
सन् २००८ मा वान डे क्रिकेटमा अष्ट्रेलिया पहिलो नम्बरमा थियो । सन् २०१८ मा आइपुग्दा अष्ट्रेलिया छैठौं स्थानमा छ । १० वर्षमा केबाट के हुन सक्छ यो यस्तो कथा छ । यस्तै कथा मलविन्दर र शिविन्दरको पनि छ ।
सन् २००८ को सुरुवातमा दुबै भाईले रेनबेन्सी कम्पनीबाट आफ्नो सबै स्टक बिक्री गरे । खरिद गर्ने कम्पनी थियो जापानको दाइची साक्यो। तत्कालिन समयमा २.४ बिलियन डलरमा डिल भएको थियो ।
रेनबेक्सी भारतको जेनरिक औषधी उद्योगको चम्किलो तारा जस्तै थियो । जब कम्पनी बिक्री भयो तत्कालिन समयमा कम्पनी भारतको सबैभन्दा ठूलो औषधी बनाउने कम्पनी थियो ।
तत्कालिन समयमा भाग्यले दुबै भाइलाई निकै साथ दिएको थियो । भाग्य कस्तो भने कम्पनी बिक्री भएको केही दिनमै अमेरिकाको ड्रग रेग्युलेटरले रेनबेक्सीबाट आयात नै बन्द गरिदियो ।
औषधीको गुणस्तर खराब भएकाले आयात नगर्ने कारण देखायो । कम्पनीको नयाँ मालिक दाइचीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । सन् २०१३ मा दाइचीले दुबै भाईमाथि मुद्दा चलायो । सन् २०१४ मा दाइचीले सन फार्मालाई रेनबेक्सी कम्पनी बिक्री भयो । तबसम्म दाइचीले हजारौं करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको थियो ।
रेनबेक्सी डिलबाट चौपटको कथा सुरु भयो जुन २००८ मा । डिल भइसकेपछि दुबै भाइसँग साढे ९ हजार करोड नगद रुपैयाँ थियो । बाँकीको साम्राज्य छुट्टै ।
तर दुबै भाइले योजना ठीक बनाएनन् । पैसा अत्यन्तै धेरै थियो । उनीहरुले बेवकुफी देखाए । आँखा बन्द गरेर विश्वास गरे । दाइचीलाई कम्पनी बिक्रीबाट आएको २००० करोड रुपैयाँ कर तिरे र बाँकी ऋण चुक्ता गरे ।
बच्यो साढे ७५ हजार करोड रुपैयाँ । दुबै भाइसँग दुई अन्य ठूलो कारोबार थियो । एउटा भारतको सबैभनदा ठूलो अस्पतालको चेन फोर्टिस हेल्थकेयर र दोस्रो सबैभन्दा ठूलो नन–बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनमा एक रेलिगेयर इन्टरप्राइजेज ।
बाँकी बेचेको पैसाबाट १७५० करोड रुपैयाँ उनीहरुल रेलिगेयरमा लगानी गरे । २२३० करोड रुपैयाँ फोर्टिसमा लगानी गरे ।
राधास्वामी सत्संग व्यासका ‘बाबाजी’सँगको सम्बन्ध
गुरिन्दर सिंह ढिल्लो उर्फ बाबा जी । जसको ब्यास सत्संग पनि चल्थ्यो । देशभरमा उनका २० लाखभन्दा बढी भक्त थिए । करिब ५००० केन्द्र थिए । अथाह जमिन समेत थियो । यो सम्प्रदाय सन् १८६१ मा बनेको राधा स्वामी सेक्टबाट टुक्रिएर बनेको थियो । ढिल्लोभन्दा पहिले उनका मामा चरण सिंह यसका प्रमुख थिए । चरण सिंहकी छोरी निम्मी सिंह मलविन्दर र शिविन्दरको आमा थिइन् । अर्थात् निम्मी सिंह ढिल्लोकि बहिनी थिइन् । मलविन्दर र शिविन्दरका लागि ढिल्लो बुबा समान थिए ।
दाइचीको डिलबाट जुन पैसा आएको थियो, त्यसबाट २७ सय करोड रुपैयाँ उनीहरुले ढिल्लो परिवारलाई दिएका थिए । यो सायद मिलेर कारोबार गर्ने मनसायले दिइएको थियो । दुबै भाइका अनुसार ढिल्लो उनका गुरु हुन । उनीहरु बीचमा गुरु–शिष्यको सम्बन्ध छ । तर राम्रो दिनमा दिएको पैसा खराब दिनमा समेत फिर्ता आएन । ब्याज जोड्ने हो भने अहिले उक्तरकम ४ हजार देखि ५ हजार करोड रुपैयाँसम्म पुग्छ । यो पैसा किन फिर्ता आएन दुबै भाइहरुले अहिलेसम्म बताएका छैनन् ।
फेरि मन्दी आयो र सबै डुबायो
गोजीमा निकै धेरै नगद थियो । त्यसबाट रेलिगेयर र फोर्टिस कम्पनीमा लगानी गरे । कारोबार बढाउनका लागि उनीहरुले निकै धेरै ऋण लिए । सोही गतीमा खर्च समेत गर्न थाले । खर्च निकै बढ्यो तर सोही अनुसारको योजना भने भएन ।
दोस्रोतर्फ ढिल्लो तथा राधा स्वामी सत्संग ब्याजका सहयोगीहरुले सोही दिनमा रियल स्टेटमा लगानी गर्न सुरुवात गरे । तब यो नाफाको सम्झौता थियो । उनीहरुले धेरैभन्दा धेरै खरिद गर्नका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिए ।
उनीको सोच कस्तो थियो भने जति लगानी गर्छौ, त्योभन्दा बढी कमाउँछौं । तर आर्थिक मन्दी त्यही समयमा सुरु भयो । जमिन र घरको मूल्य घट्न थाल्यो ।
ऋण चुलाउने चक्करमा भयो गडबडी
एकातिर बिक्री घट्यो भने अर्कोतिर मूल्य पनि घट्यो । तर जुन ऋण लिएको थियो, त्यसको ब्याज ज्यूँका त्यूँ थियो । यो पैसा चुकाउनका लागि रेलिगेयर र फोर्टिससँग भएको रिजर्भ रुपैयाँ पनि निकाल्नु पर्यो ।
यो दुईतर्फी माग थियो । यो झट्का मलविन्दर र शिविन्दरलाई त लाग्यो लाग्यो, ढिल्लो पनि चपेटामा आए । यस्तो अवस्था आयो नि उनीहरुलाई यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि कम्पनीको सम्पत्ति पनि धितोमा राख्नु पर्यो ।
यसबीच कैयन गडबडी भयो । जस्तै कैयन पटक ग्रुपको कम्पनीको पैसाबाट निजी होल्डिङ कम्पनीका पैसाले भरियो । यस आरोपमा अहिले जाँच भइरहेको छ ।
क्लिक मांडूबाट साभार
काठमाडौं । सुरुवातदेखि नै खराब बन्दै आएको अमेरिका–चीन सम्बन्ध कोरोना भाइरसका कारण झन चुलिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको सबै सम्बन्ध तोडने धम्की फेरि दिनु भएको छ । कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनको आलोचना गर्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । फक्स बिजनेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफुहरु धेरैथोक गर्न सक्छौं भन्दै […]
Posted on October 17, 2021 October 17, 2021 Author khabar silo
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान उतिबेला ला’गूऔषधि सम्बन्धी मुद्दामा जेलमा रहेका छन्, रिहाइका लागि अपिल गरिएपनि अदालतले उनलाई जमानत दिएको छैन । बिहीवारको आदेशअनुसार आगामी ५ दिन अदालत बन्द रहने भएकाले आर्यनले कम्तिमा २० अक्टोबरसम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएको छ । जेलको स्रोतलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार आर्यनलाई जेलको खाना मन परिरहेको […]
मानिसका इच्छा अनौठा हुन्छन् । संसारमा आफुलाई फरक सावित गर्न मानिसले अनेक काम गर्छ । व्यवसायमा पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आफुलाई संसारमै फरक देखाउन होडवाजी चलेको हुन्छ । यस्तै होडवाजीमा भियतनामको राजधानी हनोइमा सुनै सुनको होटल खुलेको छ । सो होटलको ढोका, कप, टेवल, धारा, वासरुम, खाना खाने भाँढा सबै सुनको ट । यो […]